Jaakadaha Jiilaalka, Dhididka, Sweatshorts - Dufiest
Ningbo Dufiest waa mid ka mid ah hogaamiyaasha koowaad ee naqshadeynta, sumadda iyo horumarinta wax soo saarka warshadaha dharka isboortiga. La aasaasay 2006, waxaan haynaa in ka badan 15 sano 'tan la xareeyay. Marka ugu horeysa 5years ， waxaan bixinaa adeegga OEM ee macaamiisheenna, ka dib waxaan bilaabi doonnaa inaan helno waaxdeena naqshadeynta ee 2012 iyo Awood-u-sameyntayadu waxay noqoneysaa mid aad iyo aad u qaan-gaar ah illaa iyo hadda. Waxaan jecel nahay inaan u soo bandhigno macaamiisheenna moodooyinka ugu dambeeya ee Sportswears ， sida: Jaakadda Track-ga ah, daba-galka hoose, funaanad, dhididka, Pullover, Jaket-ka-jaakadaha, dhididka, xeebta gaagaaban, khafiifka ah iwm. , midabaynta, daabacaadda iyo daabacaadda geedi socodka.
Isboortiga Dufiest wuxuu ku soo kordhay Premier ISO9001: 2008, Soo-saare shahaadeysan oo GRS ah oo leh tayo sare, alaab qiimo-wax ku ool ah.
Soo saaraha xirfadlaha ah ee Isboortiga, dhididka dhididka hoodie iyo raadraaca ku dhowaad 15years.Wareerkeennu wuxuu ku yaal magaalada Cixi oo ku taal agagaarka Hangzhou qurux badan！
Wax soo saarkayada hogaaminaya Sehr viel
Keen dhaqdhaqaaq badan si aad noo hesho adoo adeegsanaya adeegeena si aan u noqono maalgashi aad u faa'iido badan mustaqbalkaaga.
OEM Fashion breathable Custom Dabaasha Adult Sexy M ...
Xeebaha xeebtu waa xulasho kulul oo dadka dhexdeeda ah markay ku jiraan safarka xeebta ama guriga oo aan ku iibinayno qiimo jumladle.Waxaan nahay soosaaraha gaarka ah iyo soo-saarka dharka isboortiga ee Shiinaha Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiisha waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track ...
Surwaal Beach nimankii guddiga biyuhu gaab gaab bannaan ...
Markii loo xidho dharka dabbaasha, dogobyada waxaa badanaa loo yaqaannaa dogob dabaal ama jirridda maydhashada (ama ereyga guud ee guud ee dharka lagu maydho ama macno isku mid ah) waxayna caadi ahaan ka gaaban yihiin gaagaabyada sabuuradda, oo gaadha ilaa jilbaha. gudaha labo dogob oo dabaalan ah ayaa ah in taageero laga siiyo xubnaha taranka inta lagu dabaalanayo. Shabakaddu waxay isku duubtaa xubinta taranka ee jidhka u dhow qaab la mid ah nigisyada qaabka kooban. Tani waxay ka celineysaa inay ka baxaan dhibaatada inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka.
Astaanta Calaamadaha Faransiiska Terry Plain Hoodies Rag
Magaca wuxuu ka yimid 'Loopwheel', oo ah mashiinka tolnimada dhaqanka oo taariikh ahaan loo isticmaali jiray in lagu tolo dharka. … Haysashada siddooyinku xagga dambe ee dharka waxaa markii hore loogu talagalay inay u oggolaato dhididka inuu dhidid dhidid ka helo jirkaaga una gudbiyo dharka si aad qabow u ahaato. Shaati-gacmeed ayaa lagu sameeyaa suuf culus. Dhididka ayaa loogu talagalay in lagu diiriyo xilliga qaboobaha. Shaati-gacmeed ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu diiriyo, inkasta oo taasi aysan ahayn ujeedkeeda keliya. Oo ay la socdaan kee ...
jaakad jiinyeer jiinyeer jiinyeer hoodie for ...
Dharka dibedda ee wadada waa mid aad ufiican oo raaxo leh safarka iyo fuulitaanka iyo iibinta anaga oo ah qiimaha jumlada. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiisha waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiso iyo warshad dharka isboortiga, hoodies ， trac ...
Hoodada jiinyeerka ee 'hopper' waa mid aad u qurux badan oo raaxo u leh guriga iyo socodka oo aan ku iibinno annaga qiimaha jumladaha. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiisha waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track ja ...
Jaakada raadraaca dhogorta ragga ee Polar oo leh xariiq ...
Jaakada jiilaalka wadada waa mid aad ufiican oo raaxo leh guriga iyo socodka iyo iibinta anaga oo ah qiimaha jumlada .Waxaan nahay soosaaraha gaarka ah iyo soo-saaraha dharka isboortiga ee Shiinaha. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiisha waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track ...
Jaakada Ragga ee jiinyeerka
Raad-raacista waa maqaal dhar ah oo ka kooban laba qaybood: surwaal iyo jaakad badanaa leh jiinyeer hore. Waxaa markii hore loogu talagalay in lagu isticmaalo isboortiga, inta badan ciyaartooyda inay xirtaan dharka tartanka (sida funaanada orodka iyo gaagaaban ama dharka dabbaasha) iyo inay ka baxaan ka hor tartanka. Wanaagsan lakabaynta iyo diirimaadka inta lagu jiro maalmaha qabow ee guga / xagaaga, Jaakada raadraaca ragga waxay leedahay adeegsiyo dhowr ah (marka laga reebo inay tahay shey aad u fiican) oo aanad waligaa ...
jaakad jiinyeer jiinyeer dhar cationic haweenka caqli leh ...
macaamiisha Sehr viel
Naqshadaha cusub ee loogu talagalay xeebta xeebta, dhididka hoodie, iyo sidoo kale jaakad zip-up ah. Kaalay oo raadi sheyga ku habboon suuqyadaada - waan ku farxi doonnaa inaan helno baahidaada!